ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တပ်ဆင် ကိုထောက်ခံသည့် စစ်တပ်အင်းအားတစ်စုအာဏာသိမ်းဖို.ပြင်ဆင်နေ ဟု ပြည်သူဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ. ထုတ်ပြော | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တပ်ဆင် ကိုထောက်ခံသည့် စစ်တပ်အင်းအားတစ်စုအာဏာသိမ်းဖို.ပြင်ဆင်နေ ဟု ပြည်သူဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ. ထုတ်ပြော	July 8, 2008
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တပ်ဆင် ကိုထောက်ခံသည့် စစ်တပ်အင်းအားတစ်စုအာဏာသိမ်းဖို.ပြင်ဆင်နေ ဟု ပြည်သူဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ. ထုတ်ပြော
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း တပ်ဆင်အပေါ် စွတ်စွဲထားသော အမှုမှန်သမျှမှ ကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက် တပ်ဆင်နဲ.နီးစပ်သော စစ်တပ်အင်းအားတစ်စုက အာဏာသိမ်းဖို.ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်း ပြည်သူဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်အဖွဲ.မှ ကိုဒီနေတာ (အဓိကလှုပ်ရှားနေသူ) စူရိယစိုင် က ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်သည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတပ်ဆင်အပေါ် စွဲထားသော အမှုအားလုံး တရားရုံးကနေ စဉ်းစားနေသည့်အတွက်ကြောင့် သူကို အာကာအကွယ်ပေးဖို.အာဏာသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ ဟု သူကဆက်ပြောသည်။
အောက်တိုဘာလကျရင် စစ်တပ်ရာထူးအပြောင်းအလဲကို စစ်တက္ကသိုလ်အမှတ်(၁၀) ကျောင်းဆင်းသူများအတွက် အာဏာသိမ်းဖို. အခွင့်အလမ်းဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း၊ ယင်ကိစ္စကို လူထုအနေနဲ. မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ကြပါရန် သူကဆက်ပြီးတောင်းဆိုပါသည်။
တပ်ဆင် အမှုကို အရေးမယူနိုင်ရန် ဘတ်ငွေသန်းပေါင်းများစွာသုံးပြီး ရှေ.နေချုပ်ရုံးကို ပေးပို.ခဲ့ကြောင်း သူကပြောသည်။
လက်ရှိ ဝန်ကြီးချုပ် ဆမက်စွန်ထရာဝစ် က ဘရူးနိုင် နိုင်ငံကအပြန် လေဆိပ်မှာ အဖမ်းခံခဲ့လိမ်မည် လို. လွန်ခဲ့သော အပတ်က သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
ထို.သတင်းဟာ အခြေအမြစ်မရှိသော သတင်း မဟုတ်သည့်အကြောင်းကို လာဘ်ပေးလာဘ်ယူအရေးယူ ဌာနမှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဝီရစွမ်ခဝန်းခေတ် ကအတည်ပြု ပြောပါသည်။
ထို.ကိစ္စနဲ. ပတ်သက်ပြီး စစ်တပ်အင်းအားတစ်စု၏ လှုပ်ရှားမှုကို စောင့်ကြည့်ဖို. လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် ဆမက်ကို သူတို.တောင်းဆိုပါသည်။
သို.သော်၊ ဗိုလ်ချုပ် ရောင်ရွတ် က ထို. သတင်းမမှန်ကြောင်း ငြင်းပယ်လိုက်ပြီး သူမှာ ထို.ကဲ့သို. အတွေးအခေါ်မရှိကြောင်းပြောကြားသည်။
Suriyasai: Coup prepared by Thaksin’s supporters
7 July 2008 13:3
July 7, 2008Bangkok – The People’s Alliance for Democracy (PAD) coordinator Suriyasai Katasila revealed soldiers who have close relationship with the then-premier Thaksin Shinawatra planned to stageacoup to help free Thaksin from all accusations. Suriyasai yesterday said the coup was to protect the former prime minister from all allegations as cases against him are considered by court.
He urged people to keep eye on the military transfer in October as it could be used to pave way for the 10th class of the Armed Forces Academies Preparatory School (AFAPS) to makeacoup.
It was said several million baht were proposed to the Office of Attorney-General so that cases against Thaksin would not be prosecuted.
Prime Minister Samak Sundaravej last week gave news that he would be arrested at the airport when he came back from Brunei.
Veera Somkwamkid, secretary-general of the Anti-Corruption People’s Network, confirmed the news was not groundless.
Samak was urged to closely keep his eye onagroup of soldiers who is makingamovement — Gen Ruangroj Mahasaranont, Gen Chaisit Shinawatra, Lt Gen Prin Suwannathat, Gen Trairong Suwannathat, Gen Pornchai Kranlert, Lt Gen Ruangsak Thongdee, ACM Sukampol Suwannathat, ACM Sumet Bhodimanee, ACM Pongsathorn Buasap and Air Vice Marshal Sarayuth Thepsitha.
But Gen Ruangroj denied the news, saying he did not have such an idea.
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကို စစ်အစိုးရတို. စည်းရုံးနေ
မဲဟောင်ဆောင်မှ ကယန်းခေါ် ကြေးကွင်းပတ် ပဒေါင် ၁၁ဦး ပျောက်ဆုံးနေ